Finfinnee, Sadaasa 13,2010 –Wallagga bahaa magaalaa Naqamteetti lafa heektaara 282 irratti paarkii indaastirii ijaarramuuf qophiin taasifamaa jira.
Paarkichi dargaggoota kuma 10f carraa hojii akka uumus itti abdatameera.(FBC)
Tuesday, 21 November 2017 10:06
Finfinnee, Sadaasa 12,2010-Imaammanni wixinee hojii albuudaa ba'aa jiru rakkoo aangoo mootummaa federaalaa fi kan naannolee ammas ifatti kan adda hin baafne waan ta'eef adda baasee kaa'uu qaba jedhan hoggantoonnii fi ogeessonni hojichaa.
Tumaa kiraa sassaabdummaaf karaa banu duuchuu fi faayidaa hawaasa naannaa qabeenya albuudaa mirkaneessuurratti imaammatichaan ifatti taa'uu akka qabu himaniiru.
Imaammanni ji'oota arfan kana Mana Maree Ministirootaaf dhiyaata jedhame Ministeera Albuuda, Boba'aa fi Gaazii Uumamaatin wixiname dhimmamtootaf dhiyaachuu jalqabeera.
Imaammanni wixiname kunis sadarkaa nannnotti mariif dhiyaachuu jalqabe, hooggansaa fi ogeessa seektara hojii albuudaa naannoo Oromiyaa bira ga'eera.
Biiroon Bishaan, Albuudaa fi Inarjii Oromiyaa imaammata ba'aa jiru kanarratti sirrachuu qaba waan jedhu keessaa tokko, heera mootummaa keewwata 51 keewwata xiqqaa 5 irratti qabeenya uumamaarratti federaalli seera baasa kan jedhu ta'us, seeras baasee eyyema kennee bulchaa jira waan ta'eef hiikka labsiirratti yaadonni faallaa hiikaman jiru jedha.
Imaammata kanaan ga'een federaalaa fi naannolee ifatti taa'uu qaba jedhan hogganaan ittaanaa biirichaa obbo Jaarsoo Edeemaa.
Ministirichi obbo Mootummaa Maqaasaa imaammata wixinee kanarratti yaadni dabalamus, haqamus hin dhabamu jedhaniiru.
Ityoophiyaan hojii qabeenya albuudaarratti imaammata madda tarsiimoo fi seera ta'e hanga yoonaatti dhabdus bara 1963 irraa eegalee qabaachuuf seera ittiin bulmaataa baafattee qabdi.
Baacaa Goobanaatu gabaase.(FBC)
Finfinnee, Sadaasa 11,2010-Artiistonni Oromoo lammiilee naannoo Somaaleerraa qa’ee fi qabeenya isaaniirra buqqa’an daawwatan.
Kaleessa Harargee bahaatti imaluun lammilee magaalaa Harar qubatan daawwachuun jajjabeessaniiru.
Artiistota kanneenif amma magaalaa Harar ga’anitti magaalota jajjabootti simannaan taasifameefira.
Jillii kun Looreet Dooktar Alii Birraa, Qamar Yusuuf, Tsaggaayee Dandanaa, Taaddalaa Gammachuu, Geetaachaw Haaylamaariiyaam, Abbush Zallaqaa fi kanneen biroon kan durfamedha.
Meeshaalee nyaataa fi dhugaatii konkolaata 6tti fe’ames gargaarsan lammilee manaa fi qabeenya isaaniirra buqqa’aniif laataniiru.
Balaan mudate miidhaa akka geessise ni beekna, garuu akka tokkoomnu nu taasiseera jedhan artiistonni Oromoo.
Gidiraan isinirra gahe kan sabni hundi qooddatu waan ta’eef, waliif jirraa isinitti hin dhagahamin jechuudhan jajjabeessaniiru.
OPDO-Official irraa akka odeeffannetti, gara fuula duraatti jireenya buqqaatotaa daran fooyyessuuf artiistonni biyya keessaa fi alaa kan hojjetan ta'uu beeksisaniiru.(FBC)
Faawudeeshiniin Albaasaar Internaashinaal Saawud Arabiyaa Itiyoophiyaatti hospitaala ijaa hammayyaa ijaaruuf jedha
Finfinnee, Sadaasa 11, 2010 Faawundeeshiniin Albaasaar Intarnaashinaal Saawud Arabiyaa Itiyoophiyaatti hospitaala ijaa hammayyaa ijaaruuf jedha.
Faawudeeshiniin Saawud Arabiyaa kun hospitaala ijaa hammayyaa kanaa fi wiirtuu leenjii Birrii miliyoona 600 fi miliyoona 78 fi kuma 700 fi kuma 80n akka ijaarsisu ibsameera.
Hospitaalichi ijaaramuun damee fayyaa biyyattii fi ce’umsa beekumsaa akka guddisu ibsameera.
Ministeera Deetaan Dhimmaa Alaa Doktar Akliiluu Haayilamikaa’el hoggantoota Faawundeeshinii Albaasaar Intarnaashinaal waliin guyyaa har’aa wal-arganii mari’ataniiru.
Doktar Akliiluun wayita marii kana dhaabbati tola-ooltummaa kun kana dura deggarsa wal’aansa fayyaa iddoowwan biyyattii keessaa gara-garaatti kenneef galateeffataniiru.
Faawdeeshinichi hospitaala ijaa hammayyaa fi wiirtuu leenjii ijaaruunsaa hojii damee fayyaa jiru nideggara jedhaniiru.
Dabalataanis, hospitaalichi yuunivarsitiiwwan fi hospitaalota waliin hojjachuun ce’umsa beekumsaa damichaan jiru fi misooma humna namaa akka guddisu ibsaniiru.
Geggeessitoonni dhaabbatichaa akka ibsanitti, dhaabbatichi ijaarsi hospitaalichaa hanga xumuramutti hojiisaa ‘kiraayiidhaan’ dhihootti akka jalqabu ibsaniiru.
Hospitaalichi fi wiirtuun leenjii kun waggoota sadii keessatti xumurama jedhamee eegama.
Dhaabbati tola-ooltummaa A.L.A 2000 hanga 2017tti iddoowwan gara-garaa Itiyoophiyaa keessatti garee ogeeyyii fayyaa socho’u bobbaasuun si’a 26f qorannoo ijaa kuma 100 fi kuma 43 raawwateera.
Kanaanis baqaqsanii wal’aanuu 18,300 hojjachuun fayyaa ijaa isaanii deebisanii akka argatan kan taasise yoo ta’u, dhibamtoota ijaa 37, 200f ammoo bilisaan ‘manatsarii’ rabseera.
Ragaa kana Waajjira Dubbi-himaa Ministeera Dhimma alaa irraa arganne. (FBC)
Lammiileen qa’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa’an irra jireessi bakka duraatti deebi’uu hin fedhan- qorannaa
Friday, 17 November 2017 09:04
Finfinnee, Sadaasa 8,2010 -Qorannoon koreen gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu geggeesse akka muul’isutti lammiileen naannoo Somaalee Ityoophiyaarraa buqqa’an irra caalan isaanii bakka dhufanitti deebi’uu hin barbaadan.
Walitti qabaan korichaa Dooktar Abarraa Dheeressaan akka jedhanitti lammiilee qa’ee fi qabeenya isaanii dhiisanii buqqa’an keessaa %97 bakka dhufanitti deebi’uu hin fedhan.
Akka qorannichaatti, lammiilee naannoo Somaaleerraa buqqa’an %3 hin caalle sababa qabeenya gurguddaa achii qabanii fi gartokkee maatii isaanii achitti dhiisanii waan buqqa’aniif garasitti deebi’uuf dirqamna jedhaniiru.
Lammiilee naannoo Somaalee Ityoophiyaarraa buqqa’an miidhaa isaanirra gahuu fi wabii waan hin qabneef garasitti deebi’uu hin feenu jechuu isaanii Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa addeessera.
Koreen gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu lammiilee kunneen muuxannoo, dandeettii fi fedhii isaaniirratti hundaa’uun hojii deebisanii dhaabuu hojjechuuf hojii qorannoo odeeffannoo haala buqqaatota kanaa geeggeeffamaa jiru xumurarraa gahuu ifoomsera.
Lammiilee sababa walitti bu’iinsa kanaan naannoo daangaa Oromiyaatii buqqa’an bakka dhufanitti deebi’anii jiruufi jireenyasaanii akka geeggeeffataniif korichi hojjechaan jira jedheera.
Lammiileen naannoo Somaalee Ityoophiyaarraa qa’ee fi qabeenyasaanii dhiisanii dhufan 145,445 yoo ta’an, lammiileen naannoo daangaa Oromiyaa buqqa’an 458,488 walumatti lammiileen buqqa’an 603,933 akka ta’an ibsameera.
Lammiilee kunneen deebisanii dhaabuuf haaldureewwan barbaachisu mootummaa naannichaa wajjin ta’uun poteenshaala jiruu fi fedhiisaanii, muuxannoo fi ga’umsa isaanii irratti hundaa’uun yeroo gabaabaa keessatti hojiitti ni galus jedhameera.(FBC)
Dhaabbilee Barnoota Olaanootti Qaamooleen Baruu fi Barsiisuu Gufachiisan Itti Gaafatamuu jedha Ministeerrii Barnootaa
TV OROMIYA NOV-14-2016 Views : 3694
TV OROMIYA NOV-13-2016 Views : 27
Torbe Kana 29240
Ji'a Kana 74273
01/05/07 irraa eggalee 6305312
Kan Amma Daawwachaa Jiran 13